Sirdoonka Mareykanka oo shaaca ka qaaday warbixin ceeb dhex joojisay Imaaraadka - Caasimada Online
Home Dunida Sirdoonka Mareykanka oo shaaca ka qaaday warbixin ceeb dhex joojisay Imaaraadka
Sirdoonka Mareykanka oo shaaca ka qaaday warbixin ceeb dhex joojisay Imaaraadka
Washington DC (Caasimada Online) – Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraadka Carabta ay ka dambeysay afduubkii Internet ee lagu sameeyey hay’adaha warbaahinta dowladda Qatar ee dhaliyey xiisadda ka aloolsan gacanka Carbeed.
Warbixinno ay soo ururiyeen sirdoonka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in madaxda Imaaraadka ay 23-kii May ka doodeen arrintan, si qiil loogu raadiyo in xiriirka loo jaro dalka Qatar.
Si kastaba, warbixintu waxay sheegtay in weli aysan kala caddeyn in Imaaraadka ay si toos ah ugu dhaqaaqeen afduubkan internet, ama ay adeegsadeen shirkado u fuliyo, hase yeeshee ay caddahay in qorshahan ay ayaga lahaayeen.
Safiirka Imaaraadka Carabta ee Washington DC, Yousef al-Otaiba, ayaa si kulul u beeniyey in dalkiisa uu ka dambeeyey arrintan.
“Imaaraadka haba yaraatee wax lug ah kuma lahan afduubkan Internet ee la sheegay, balse waxaan shaki ku jirin in Qatar ay maal-geliso argagixisada” ayuu yiri.
Warbixinta sirdoonka Mareykanka ayaa caddeyn u ah in Qatar gardarro lagu maagay, islamarkaana Sacuudiga iyo Imaaraadka ay yihiin dambiilayaal ku kacay burcadnimo dhinaca Internet-ka.